कोरोनाले आमाको मृ’त्यु, अपाङ्ग छोराले आमाको अनुहार हेर्न नपाउँदाकाे छोराकाे यस्तो पीडा… मुटु छिया-छिया बनाउने! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > कोरोनाले आमाको मृ’त्यु, अपाङ्ग छोराले आमाको अनुहार हेर्न नपाउँदाकाे छोराकाे यस्तो पीडा… मुटु छिया-छिया बनाउने! (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 28, 2020 June 28, 2020 अन्तराष्ट्रिय, भिडियो, स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । कोरोनाका कारण निधन भएका ब्यक्तिलाई अन्तिम संस्कारका समयमा पनि परिवारका सदस्यले भेट्न पाइदैन । नेपालमा कोरोनाका कारण निधन भएकाको शव ब्यवस्थापन नेपाली सेनाको टोलीले गर्छ । परिवार सदस्यले टाढावाट अन्तिम संस्कार हुँदै गरेको दृष्य हेर्छन ।यो निकै हृदयविदारक घटना हो । मानिसले आफ्नो जिवनको अन्तिम अवस्थामा आफन्तको साथ चाहन्छ । निधन भएपछि गर्ने धर्म अनुसारको संस्कार हुन्छ ।
तर कोरोनाका कारण सबै धर्म र सम्प्रदायका मुल्य मान्यता विथोलिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको नियम अनुसार कोरोनाका कारण निधन भएको ब्यक्तिको अन्तिम सस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर आफन्त गुमाएको पीडा छ भने अर्को तर्फ अन्तिम संस्कार समेत गर्न नपाउँदाका त्यो भन्दा पनि ठूलो पीडा छ । अहिले एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो भारतको हो ।
दलितसंग गएकि छाेरीज्वाइँ भनेर सम्मान गरेर घरमा बोलाएर पालेकै ज्वाइँले सासुलाई मा’रिदियो (भिडियो)